Apôstôly roa ambin'ny folo - Wikipedia
Apôstôly roa ambin'ny folo
(tonga teto avy amin'ny Apostoly roa ambin'ny folo)
Ilay Sakafo hariva farany, nataon'i Giovanni Pietro Rizzoli, taona 1520 eo ho eo.
Apôstôly no ilazana ireo mpianatra roa ambin'ny folo nosafidin'i Jesoa manokana hamita iraka, dia i Petera, i Andrea, i Jakoba zanak'i Zebedeo, i Joany, i Filipo, i Bartolomeo, i Tomasy, i Matio, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Joda, i Simona Zelota ary i Jodasy.
Ankoatr'izany, araka ny lovantsofina kristiana dia nanavaka mpianatra fitopolo koa i Jesoa ka ireo no lasa eveka taty aoriana. Ireto mpianatra ireto dia nitory ny vaovao mahafaly (na filazantsara na evanjely).
I Paoly avy any Tarsisy dia isain'ny lovantsofina kristiana ho apostoly faha-13: atao hoe "Apostolin'ny Jentilisa" (na Apostolin'ny Jentily) izy.
Ny Katolika sy ny Ortodoksa dia mihevitra ny eveka ho mpandimby ny Apostoly, ka manisy lanjany manokana ny fandimbasan'ny eveka ny Apostoly (fifandimbiasana apostolika), izany hoe ny lovatsofina izay mamatotra azy dia mitohy ahatrany amin'ny Apostoly na ny fifanarakarahan'ny olona izany na ny fifanarakarahan'ny fampianaram-pinoana.
2 Ireo Apostoly roa ambin'ny folo
2.1 Petera na Piera
2.3 Jakoba zanak'i Zebedeo
2.4 Joany na Jaona
2.6 Bartolomeo na Bartelemy
2.7 Tomasy na Tôma
2.9 Jakoba zanak'i Alfeo
2.10 Joda na Jodasy Tadeo
2.11 Simona Zelota
Ny teny hoe Apostoly dia avy amin'ny teny grika hoe Απόστολος /Apostolos izay midika hoe "iraka". Io teny io dia avy amin'ny matoanteny hoe ἀποστέλλειν / apostellein midika hoe "maniraka" "mandefa". Nandikana ny teny hebreo hoe shaliah ny hoe apostolos.
Ireo Apostoly roa ambin'ny folo[hanova | hanova ny fango]
Ireto avy ireo Apostoly roa ambin'ny folo notendren'i Jesoa:
Petera na Piera[hanova | hanova ny fango]
Simona na Simona Barjona na Bar-Jona no tena anaran'i Petera. Jiosy avy any Betsaida any Galilea i Petera. Mpanjono no asany. Araka ny lovantsofina dia izy no nanoratra ny Epistily voalohany sy faharoan'i Petera. Ny lovantsofina katolika koa dia manao azy ho ilay nanorina ny Eglizy Katolika voalohany sy Papa voalohany. Rahalahiny i Andrea.
Andrea[hanova | hanova ny fango]
I Andrea dia Jiosy Galileana rahalahin'i Petera. Mpianatr'i Joany Batista izy taloha. Atao hoe Protokleto ("Ilay Nantsoina Voalohany") koa izy satria nanaraka an'i Jesoa rehefa vita batisa ity farany.
Jakoba zanak'i Zebedeo[hanova | hanova ny fango]
I Jakoba zanak'i Zebedeo (na Zebedio) izay atao hoe koa Jakoba Zokiny (na Jakoba Lehibe) dia rahalahin'i Joany zanak'i Zebedeo. Izy roalahy ireo dia antsoina koa hoe Boanergés izay midika hoe "zana-baratra". Tsy afangaro amin'i Jakoba zanak'i Alfeo i Jakoba zanak'i Zebedeo.
Marihina fa tsy nanoratra epistily na i Jakoba zanak'i Alfeo na i Jakoba zanak'i Zebedeo. Tsy izy ireo no nanoratra ny Epistilin'i Jakoba.
Joany na Jaona[hanova | hanova ny fango]
I Joany na Jaona Apostoly dia atao hoe Joany zanak'i Zebedeo na Jaona zanak'i Zebedio koa izy. Rahalahin'i Jakoba zanak'i Zebedeo izy. Mpanjono ny asany. Atao hoe Boanerges izy roa ireo. Misy ny mpandinika mihevitra fa i Joany Apostoly dia tsy iza fa i Joany Evanjelista ihany. Ao koa anefa ireo mandà izany. Fanampin'izany dia heverin'iretsy farany fa tsy olon-tokana no nanoratra ny Filazantsaran'i Jaona. Ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy manao azy hoe Jaona fa ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy kosa Joany.
Filipo[hanova | hanova ny fango]
Mpianatr'i Joany mpanao Batisa taloha i Filipo. Izy ilay nanao hoe "Asehoy anay ny Ray".
Bartolomeo na Bartelemy[hanova | hanova ny fango]
I Bartolomeo na Bartelemy dia atao hoe Bar-Tolmay amin'ny teny arameana. Atao hoe Βαρθολομαῖος / Bartholomaíos izy amin'ny teny grika. Ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy no ahitana ny hoe Bartolomeo (anglisy: Bartholomew) fa ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy kosa anao azy hoe Bartelemy (frantsay: Barthélémy). Ny mpandinika sasany dia mihevitra fa olona iray i Bartolomeo sy i Natanaela na Nataniely. Ny hoe Bar-Tolmay amin'ny teny arameana dia mety midika hoe "Zanaky ny bainga" na koa "Zanak'i Tolmai".
Tomasy na Tôma[hanova | hanova ny fango]
I Tomasy na Tôma dia ilay mpianatra tsy nino ny fahafatesan'ny Jesoa ka nila nitsapa lanivoany. Atao hoe Te 'Oma izy amin'ny teny arameana izay midika hoe "kambana". Δίδυμος / Didymos ny dikan'izany amin'ny teny grika. Atao hoe Tomasy ilay Didimo izy ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Θωμᾶς / Thomas no fiantsoana azy amin'ny teny arameana. Misy filazantsara apokrifa izay mitondra ny anarany (Filazantsaran'i Tomasy).
Matio[hanova | hanova ny fango]
I Matio dia atao hoe Ματθαῖος / Matthaios amin'ny teny grika fa Mattai kosa amin'ny teny hebreo. Io dia fanafohezana ny hoe Mattithyâhû (Mattith "fanomezana" sy Yâhû "Andriamanitra"; "fanomezan'Andriamanitra"). Atao hoe Matio Levy na Levy fotsiny koa izy na Levy zanak'i Alfeo. Mpamory hetra ny asany taloha. Ny lovantsofina kristiana dia manao azy ho nanoratra ny Filazantsaran'i Matio.
Jakoba zanak'i Alfeo[hanova | hanova ny fango]
I Jakoba, zanak'i Alfeo izay atao hoe amin'ny teny grika Iάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου / Iakôbos o toû Alphaiou dia tsy afangaro amin'i Jakoba zanak'i Zebedio. Atao hoe koa Jakoba Zandriny (na Jakoba Kely) izy. Ny hoe Alfeo na Alphaios (grika) dia avy amin'ny anarana arameana hoe Alpai. Ya'akov ben Halfay ny fiantsoana azy amin'ny teny hebreo. Ny hoe Jakoba Zandriny na Kely dia fandikana ny teny grika hoe Ἰάκωβος ὁ μίκρος / Iakōbos ho mikros.
Marihina fa tsy nanoratra epistily na i Jakoba zanak'i Alfeo na i Jakoba zanak'i Zebedio. Tsy izy ireo no nanoratra ny Epistilin'i Jakoba.
Joda na Jodasy Tadeo[hanova | hanova ny fango]
I Joda dia atao hoe koa Tadeo na Joda zanak'i Jakoba na Jodasy zanak'i Jakoba na Joda Tadeo na Jodasy Tadeo. Ἰούδας Ἰάκωβος / Ioudas Iakôbos amin'ny teny grika. Tsy afangaro amin'i Jodasy Iskariota i Jodasy Tadeo (Ἰούδας Θαδδαιος / Ioudas Thaddaios amin'ny teny grika).
Simona Zelota[hanova | hanova ny fango]
I Simona Zelota dia tsy afangaro amin'ny Simona Petera. Ny hoe zelota dia azo adika hoe "mafana fo" na "saro-piaro".
Jodasy[hanova | hanova ny fango]
I Jodasy dia fantatra koa amin'ny anarana hoe Jodasy Iskariota mba hiavahany amin'i Jodasy Zelota na Joda Zelota. Ny hoe Iskariota dia mety midika hoe "avy amin'ny fokon'i Isakara". Ὶούδας Ὶσκάριωθ / Ioudas Iskariôth na Ὶούδας Ὶσκαριώτης / Ioudas Iskariôtês no fiantsoana azy amin'ny teny grika. Yəhûḏāh ʾÎš-qəriyyôṯ amin'ny teny hebreo. Izy ilay namadika an'i Jesoa ka nanamora ny fisamborana azy. Misy filazantsara apokrifa izay mitondra ny anarany, dia ny Filazantsaran'i Jodasy.
Mpianatr'i Jesoa fitopolo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apôstôly_roa_ambin%27ny_folo&oldid=992398"
Voaova farany tamin'ny 11 Mey 2020 amin'ny 13:25 ity pejy ity.